၁၈ကြိမ်မြောက် ဂျပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား
၂၀၁၇ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၀ရက်နေ့တွင် ၁၈ကြိမ်မြောက်ဂျပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲ၏ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်(မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း(MAJA)တို့ပူးပေါင်းပြီး၊ ဂျပန်ဖောင်ဒေး ရှင်း၊ ဂျပန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း မြန်မာ(JCCM)၊ ဂျပန်လူမျိုးများအသင်း ရန်ကုန်နှင့် ဂျပန်-မြန်မာ အသင်းတို့ကပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြပါသည်)။ လျှောက်ထားသူ(၄၉)ဦးထဲမှ ပဏာမရွေးချယ်ခံရသည့်ပြိုင်ပွဲဝင်(၁၃)ဦးတို့က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။မိသားစုနှင့်အမှတ်တရမှစ၍ အနာဂတ်၏အိမ်မက်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နည်းပညာ၊ ထို့အပြင်လူမှုရေးကိစ္စရပ်များအထိ အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကိုပြောဆိုယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး ပြိုင်ပွဲခန်းမမှာအထူးစည်ကားခဲ့ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံး၏ယှဉ်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက် ဒိုင်များကစစ်ဆေးမှုကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထူးချွန်သူ(၃)ဦးနှင့် ဇွဲဆုရရှိသူတို့ကိုကြေညာခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်သည့် မခင်စပယ်ဆင့်သည်ယခုမှစ၍ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေဖြင့် လူနာများနှင့်ဆက်ဆံ သည့်သဘောထားချမှတ်ရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ရုပ်ရှင်ကားများ၏ဩဇာသက်ရောက်မှုကိုများစွာလက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟူသော စကားပြောဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။စကားပြောမှာသဘာဝကျပြီး သွက်သွက်လက်လက်ရှိကာ စကားလုံး၏ဆက်စပ်မှု၊အရှိန်၊ စကားပြောပုံမှစ၍ ပြိုင်ပွဲဝင်၏နွေးထွေးသော[စိတ်ရင်း]ကို ကူးဆက်လာပြီး ဒိုင်လူကြီးအားလုံး၏မြင့်မားသည့်အကဲဖြတ်မှုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ကိုဂျပန်သံအမတ်ကြီးMr. Higuchi ၊ ဆုလက်ဆောင်ကိုဂျပန်လူမျိုးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Mr. Idoနှင့် ဂျပန်နိုငံသို့အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်ကို ဂျပန် - မြန်မာအသင်း အတွင်းရေးမှူး Mr.Obaတို့ကအသီးသီးပေးအပ် ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် မခင်စပယ်ဆင့်သည်ယခုအခေါက်ပထမဆုရရှိခဲ့သည့်အတွက် ယခုဆောင်းဦးတွင်တိုကျိုမြို့၌ကျင်းပမည့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ စကားပြောပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
အမျိုးမျိုးသောဂျပန်စာ စာအုပ်များကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးသင်ယူခဲ့သည့် ဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုးကို အစွမ်းကုန် အသုံချပြီး နားထောင်ကောင်းသည့်စကားပြောကိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။ဒိုင်လူကြီးများက [ယခုမှစ၍ မျက်ရည်အများကြီးကျပြီး ပြီးပြည့်စုံသည့် လူနေမှုဘဝကိုရရှိပါစေ]ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးမြင့်မားသည့်အကဲဖြတ်မှုကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ကိုဂျပန်သံအမတ်ကြီးMr. Higuchi နှင့်၊ဆုလက်ဆောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Nakagawaတို့ကအသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
မိမိ၏မိသားစု၊ဂျပန်စာလေ့လာမှုအတွေ့အကြုံကို ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးဖြင့်ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုယှဉ်ပြိုင်သွားခဲ့ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းတိကျစွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး သင်ယူခဲ့သည့်ဂျပန်စာ၏အရည်အချင်းကိုအကဲဖြတ်သည့် ဒိုင်လူကြီး၏မှတ်ချက်လဲရှိခဲ့ပါသည်။
ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ကိုဂျပန်သံအမတ်ကြီးMr. Higuchiနှင့်ဆုလက်ဆောင်ကိုရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်၊ အငြိမ်းစားဌာနမှူး ဒေါ်ဇင်မာအုန်းတို့က အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်စာကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာရာတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည့်စာလေ့လာနည်းကို မိမိကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီး ရှင်းလင်းပြော ဆိုခဲ့ပါသည်။မျက်နှာအမူအရာနှင့်ကိုယ်နေဟန်ထားတို့မှာကြွယ်ဝပြီး ဒိုင်လူကြီးများ၏ကောင်းမွန်သည့်မှတ်ချက် များရရှိခဲ့ပါသည်။
ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ကိုဂျပန်သံအမတ်ကြီးMr. Higuchiနှင့်ဆုလက်ဆောင်ကို မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စီစီရှိန်တို့ကအသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။